Godaanttota heraan alaa fi Motummaa Masrii – Welcome to bilisummaa
Godaanttota heraan alaa fi Motummaa Masrii
bilisummaa April 14, 2015	Leave a comment
Hegeree Oromiyaa Ebela 15/2015
Godaanttonni Ethiopia namni 19 qabamee harka Motummaa Masrii jiraachuun isaanii gabaafamee jira.
Akka gaazexaan Sagalee “Nubaa “
ja’amu ebela 15/2015 Waajjira Polisi Magaalaa Aswaan waabeyfachuun gabaasetti namonni kunneen dallalota isaan ofaa jiru lamaa waliin qabamu godaanttota kannenii ibsee jira.
Akka gabaasa gaazexaa kanaarraa hubachuun dandeyametti hundi namota qabamanii godaanttota warraa ethiopia tahuu ibsee biyya Masrii daangaa cabsani heraan ala seenu isaanitiif waajjira Polisi Magaalaa Aswaanitti qoratamaa jiraachuu isaanii ibsee jira.
Akkuma yaadatamuu ebela 12/2015 godaanttonni heraan alaa gara biyyota Awrophaa seenuuf oso imalaa jiranii namni 129 irraa namni 3 bishaaniitti du’anii 126 ammo Mana hidhaa biyya Masrii keysatti dararaa guddaa argaa jiraachuun isaanii ni yaadatamaa.
Tags Godaantoota misra
Previous Guyyaa goototaa Oromoo ilaachisuun dhaamsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO-Jijjiramaa)
Next Illegal immigrants from Ethiopia attempting to cross into Yemen stand at their makeshift shelter in Bosasso, northern Somalia’s breakaway Puntland region